Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नवराज विक जो आफैले ह'त्या भोग्नुपर्यो, कु'तर्क प्रति केही प्रश्न... - Pnpkhabar.com
परिवर्तनको लागि हाम्रो आवाज (संरक्षक )
काठमाडौं, १५ जेठ : रुकुम चौरजहारीको पासबिक नरसङ्हार प्रति विभिन्न मतहरु देखिए, सुनिए, त्यसपछि मलाइ म आफु बाचेको समाज प्रती यतिबिघ्न घृ’णा जागेर आयो ! किनकी यहि समाजका क्रान्तिकारी भन्ने र सोच्नेहरु, यहि समाजका अगुवा सोच्नेहरु नै नवराज विकहरु जो आफैले ह’त्या भोग्नुपर्यो, उनीहरुको दोष खोजिरहेका छौं !
उसको कमजोरी खोतलिरहेका छौ र भन्छौ लकडाउनको बेला केटी भगाउन दल-बल सहित जानेको यस्तै दुर्गती हुन्छ। यो जातभातको कुरै हैन रे। जातिय रङ् दिन खोज्यो रे । मारेको हैन आफै मरेका हुन् रे । यो कु’तर्क गर्ने कु….हरु प्रति मेरो केही प्रश्नहरु छन् –
१) जातियताको कुरा थिएन भने प्रेम सम्बन्ध थियो भनेर पुष्टि भैसक्दा समेत सहज रुपमा किन विवाह हुनसकेन ? उमेरको कारण ? यदि उमेरको मात्र कारण हो भने उमेर पुगेपछी विवाह गरिदिने भन्ने आपसी सहमति भएको थियो दुई परिवार बिच ? त्यो नहुनुको पछाडि जातिय पर्खाल हैन र ? के अहिले सम्म केटी पट्टिको परिवारले हामी छोरी दिन तयार थियौं, भन्ने कुनै अभिव्यक्ति सुन्नु भएको छ ?
२) यस घटनामा बाच्न सफल एक युवकले भनिसकेका छन्, कि उनीहरु केटीको घर छेउ पुगेर नवराज लगायतलाई देख्ने बित्तिकै केटीको आमाले त डुम फेरि आइस ? तँलाई अस्तिको कु’टाइले पुगेन ? आज तँलाई नमारी छोड्दिन भनेको कुरा मिठा हो ? यो जातिय कुरा हैन ?
३) यो ह’त्या हैन भनेर आफै हा’मफालेर म’रे भन्ने बनाएर अ’पराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ । बाचेकाहरु जो आफैले बयान दिइरहेका छन् कि हामीलाई ढुङ्गा, हसिया, चिर्पट, लौरा आदिले प्र’हार गरेका हुन भनेर ह’त्या हो कि हैन भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो कि हैन ? फेरि मिडियामा समेत आइ गाउँलेहरुले वडा अध्यक्षको निर्देशनमा हामीले लखेटेर नियन्त्रणमा लिन खोज्दा कु’टपिट समेत गरेका हौँ भनेर खुल्लेआम बोलिरहेका छन् । यो ह’त्याको प्रामण हैन ?
४) लकडाइउनको उल्लङ्घनका कुरा पनि आए, ठिक छ यो गल्ति नै हो । यदि लकडाउन कडाइपूर्वक लागु भएको भए उनीहरु कसरी त्यहाँसम्म पुगे ? अनि के यो लकडाउन नवराजहरुलाई मात्र लागु हुने हो ? त्यत्रा गाउँलेलाई लाग्दैन र ? ति वडा अध्यक्षलाई थाहा थिएन ?
५) ल मानिलिऔ कि लकडाउनको बेला किन जानुपरेको भन्ने छ, त्यत्रा मान्छे किन लिएर गएको भन्ने छ । पहिला जादा पनि कु’टपिट गरेर उल्टै प्रहरीमा थुनिदिएका रहेछन् त्यसैले केटी आफैले तिमी माथी अस्ति कु’टपिट भको छ केही साथी समेत लिएर आउ भन्ने सल्लाह दिएको भन्ने बुझिन्छ। किन त्यत्रा मान्छे लिएर गएको भन्ने प्रश्नको उत्तर हैन यो ?
६) हुलहुल्लज गरेर छोरी उठाउन आएपछि बाँकी राख्छन् त भन्ने प्रश्न गरे कतिले…के ति नवराज समुहका केटाहरुले के के अ’पराधीक काम गरे त्यँहा पुगेर ? हा’तह’तियार लिएर गएका थिए ? क-कसलाई हात हाले ? क-कसको घरमा छिरे ? घर भित्र छिरेर ति केटीलाई तान्न गएको थियो ? गाउँलेहरुले त त्यो केही भन्या छैन । केही गरेका भए त भन्ने थिएनन् ?
७) अर्को कुरा केटीका आमाले गाली गरेपछि डराएर फर्कदै गर्दा लखेटी लखेटी मा’र्नु मात्र विकल्प थियो त ? मा’र्नै पर्ने वाध्यकारी अवस्था के थियो ति गाउँलेको ? ति केटाहरुलाई नमारेको त्यो गाउँ नै साखाप हुने स्थिती थियो ? समातेर उउनीहरुको कसुर अनुसार कारवाही गर्न प्रहरीलाई बुझाउन सकिन्नथ्यो ?
यि यस्ता माथी उल्लेखित सवालहरुको एकमुस्ट उत्तर यही हो कि यो सरासर जातिय विभेदको आधारमा सृजित सोच्न समेत नसकिने अत्यन्त निन्दनिय नरसङ्हार हो यो । त्यसैले को कुन जाती हुँ भनेर जोखेर तौलेर आफ्नो दल, वर्ग, जातको बचाउको पक्षमा बोल्नु भन्दा पनि एकपटक सबैजना न्यायको पक्षमा उभिऔँ।
यसमा कुतर्क गर्नेहरु प्रती पनि हार्दिक श्रद्धान्जली दिनुपर्ने हो तर त्यसतो अमानवियता कहिलेनी सिकिएन। नवराज विक लगायत मृ’तकहरुपर्ती भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । पक्राउ परेका १२ जना मात्र हैन कि ति घटनामा सम्लग्न ति १००/१५० (अनुमानित) सबैलाइ कारवाहीको भागिदार बनाइयोस्।
यो ह’त्याका’ण्डलाई तोडमोड गरि दोषीलाई उन्मुक्ती दिलाउन खोज्ने नेता, साम्सद, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि घिच्चाएर ल्याएर मतियारको रुपमा कानुनी कठ्घरामा उभ्याई कारवाही गरियोस् । अन्त्यमा मृ’तक परिवारले न्याय पाओस, यस घटनामा जिवित भाइहरुले सुरक्षित महसुस गरि बाच्न पाओस भन्ने अपिल समेत गर्दछु।